အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ လွတ်လပ်စွာတင်သွင်းခွင့်ပြုထားသည့် ပဲတီစိမ်းအပေါ်ကန့်သတ်တင်သွင်းရန် မူဝါဒ တစ်ရပ် ပြောင်းလဲထုတ်ပြန်မှုအပေါ် ပြည်တွင်း၌ စိုက်ပျိုးထွက်ရှိမည့် ပဲတီစိမ်းများ ဈေးကွက် ထိခိုက်မှုမရှိစေရေး ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးသို့ စီး | Commerce
Tue, 02/15/2022 - 07:33 -- mocadmin
နေပြည်တော်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့အထိ လွတ်လပ်စွာတင်သွင်းခွင့်ပြု ထားသည့် ပဲတီစိမ်းအားလွတ်လပ်စွာတင်သွင်းကုန်အဖြစ်မှ ကန့်သတ်တင်သွင်းခွင့်ပြုသည့် ကုန်စည် အဖြစ်သို့ မူဝါဒပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ချိန်မှ ချက်ချင်းအကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိစေမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာချက်တစ်ရပ်ကို ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၁ ရက်နေ့တွင် အိန္ဒိယ နိုင်ငံ၊ စီးပွားရေး၊ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာနက Notification. S.O. 624 (E) ဖြင့် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါသည်။ သို့ဖြစ်ရာ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၁ ရက်နေ့ နောက်ပိုင်း အိန္ဒိယ နိုင်ငံသို့ တင်ပို့ရန် အသင့်ဖြစ်နေပြီး ဈေးကွက်တင်ပို့ရန် အခက်အခဲကြုံတွေ့နေရသည့် ဆိပ်ကမ်းသို့ ရောက်ရှိပြီးနှင့် လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ရှိ ပဲတီစိမ်း အိန္ဒိယနိုင်ငံဈေးကွက်သို့ ပုံမှန်တင်ပို့နိုင်ရေး နှင့် ပြည်တွင်း၌ စိုက်ပျိုးထွက်ရှိလာမည့် ပဲတီစိမ်းများ ဈေးနှုန်းကျဆင်းမှုမဖြစ်ပေါ်စေရေး ညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကို ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၄ ရက်နေ့ (၁၅:၃၀) နာရီအချိန်တွင် စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပခဲ့ရာအစည်းအဝေးသို့ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာပွင့်ဆန်း တက်ရောက်အမှာ စကားပြောကြားခဲ့သည်။
အစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက အမှာစကားပြောကြားရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ ပဲမျိုး စုံစိုက်ပျိုးမှု အနေဖြင့် စိုက်ဧက (၉.၉) သန်းခန့်ရှိပြီး ပဲမျိုးစုံတန်ချိန် (၄.၁) သန်းခန့် နှစ်စဉ်စိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်လျက်ရှိရာ ပဲတီစိမ်း ပြည်ပတင်ပို့မှု အနေဖြင့် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် တန်ချိန် (၇) သိန်းခန့်ကို ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ (၆၄) နိုင်ငံသို့ တင်ပို့ခဲ့ကြောင်း၊ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာနှစ် (အောက်တိုဘာလမှ ဖေဖော်ဝါရီလ ၄ ရက်နေ့) အထိ ပဲတီစိမ်း တန်ချိန် (၁၄၇,၃၂၆) တန်ကို ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်သို့ တင်ပို့ခဲ့ မှုအနက် အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဈေးကွက်သို့ တင်ပို့မှုမှာ (၁၈,၈၄၂) တန်၊ ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် ၁၂ % ခန့်သာ ပါဝင်ပါကြောင်း၊ ပဲတီစိမ်းကို အိန္ဒိယဈေးကွက်သို့ ပုံမှန်ဆက်လက် တင်ပို့နိုင်ရေးအတွက် ဝန်ကြီး ဌာနအနေဖြင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ ချိတ်ဆက်၍ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီး၊ အသင်းအဖွဲ့များ အနေဖြင့်လည်း ဈေးကွက်တည်ငြိမ်မှုရှိစေရေးနှင့် EU အပါအဝင် ဈေးနှုန်း ပိုမိုရရှိနိုင်မည့် အခြားဈေးကွက်များသို့ တင်ပို့နိုင်ရေးအတွက်လည်း စီမံဆောင်ရွက်သွားရန် လိုအပ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ဆက်လက်၍ အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်လာသူများက ပဲတီစိမ်းဈေးကွက်တည်ငြိမ်ရေး၊ တန်ဖိုးမြင့်ထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်တင်ပို့နိုင်ရေး၊ ဈေးနှုန်းပိုမိုရရှိနိုင်မည့် အခြားဈေးကွက်များသို့တင်ပို့နိုင်ရေး၊ ​ G to G စာချုပ်ဆို၍ ပြည်ပသို့ ပိုမိုတင်ပို့နိုင်ရေးတို့နှင့် ပတ်သက်ပြီး ဝိုင်းဝန်းအကြံပြု ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
အစည်းအဝေးသို့ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ ဒုတိယဝန်ကြီး၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ သက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ မြန်မာ့ကုန်ပစ္စည်း စစ်ဆေးရေးနှင့် စမ်းသပ်မှုလုပ်ငန်းလိမိတက်၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ စီးပွားရေးသံမှူးနှင့် မြန်မာနိုင်ငံပဲမျိုးံစုံနှင့် နှမ်းကုန်သည်များအသင်းမှ တာဝန်ရှိသူများ Virtual စနစ်ဖြင့် ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။